Indlela yokukhetha ifenisha emanzini
Cishe njalo ukuthenga ifenisha entsha kuyinto umcimbi wonke. Ikakhulukazi uma ifenisha ye-nursery. Abazali babhekene nomsebenzi wokuthola inani elidingekile, izinto ezithakazelisayo nezisebenzayo ezizosiza ukudala umuzwa wendawo yakho yengane. Ifenisha yezingane kuhlale kunzima ukukhetha, ngoba kufanele ihlanganise ikhwalithi, ukuphepha kanye nentengo engabizi.
Okungeke kwenzeke kodwa kujabule-akudingeki ukuba ukhathazeke ngokuthi ungayithola kuphi, ngoba ifenisha ukhe manje ilula kakhulu. Izitolo, izixazululo zokwakha kanye nezinhlu ziyizinto ongazifisa. Ipharamitha eyinhloko lapho ukhetha yindawo yekamelo nokuthi zingaki izingane ezihlala kuyo. Igumbi lezingane kufanele libe likhulu kakhulu, kungakhathaliseki ukuthi ingane ingakanani. Isikhala samahhala kumele sibe okungenani isigamu segumbi.
Kulula ukubona ukuthi igumbi lenzelwe ingane: itafula elishintshayo, i-arena, isihlalo sikamama - futhi igumbi lilungele. Kuthiwani uma ingane ihloselwe izingane ezimbili zesikole? Kulesi simo, ukukhishwa kuzoba ukusetshenziswa kwefenisha ye-ergonomic, njengemibhede ephumayo, imibhede yebhino, izigqoko zokugqoka. Ingane ngayinye idinga indawo yakhe ehlukile yokutadisha, indawo yokuzilibazisa kanye nombhede.
Esinye sezixazululo ezivame kakhulu ukuhlukanisa amakamelo emikhakheni ehlukene, njengokudlala, ukulala, ukusebenza. Lokhu kungenziwa ngekrini, kwikhabhinethi noma emapumputhe, kanye nezinto eziqedile zokuqeda noma izixazululo zombala.
Igumbi lomntwana kufanele 'likhule' nalo. Njalo eminyakeni engama-4-6, ushintshe ngokuphelele ukuhlinzeka nokuhlobisa i-nursery. Umbhede omncane uboniswa njenge "lorry", ideskithophu yekhompuyutha ishintsha ibhokisi ngamathoyizi. Lokhu kungase kube yisikhubekiso phakathi kwabazali nezingane, njengoba abazali ngokwemvelo bafuna ifenisha ukuba bakhonze isikhathi eside ngangokunokwenzeka, futhi izingane ezikhulile zifuna ukushintsha isimo, ukuze bangabi namahloni yilo gumbi "labantwana" nabo. Kufanele ukhumbule lokhu ngokuthenga umbhede wemoto noma "inkambiso yenkosikazi" yengane. Ngesikhathi esifanayo, akudingeki ukuba uye kwenye eyedlulele futhi uthole ifenisha "yokukhula" - inyane elizama ukuboleka umbhede omkhulu kakhulu kuye, libukeka elingenakuzivikela futhi lizwa lingakhululekile.
Lapho nje ingane ifika esikoleni samabanga asenkulisa, igumbi lomntwana lizofaka itafula, umbhede nesihlalo esihambelana nokukhula kwengane, ikhabethe lezingubo kanye nekhabhinethi yezandla zobuciko kanye nezincwadi. Kungaba mnandi ukuthi ube nezinqola eziningana noma amabhokisi amathoyizi kanye nebhodi lokunamathisela ngezinhloso zemfundo, ukukhwabanisa noma isihlalo sobuhlalo sabamenywa. Kumele kukhunjulwe ukuthi ukukhanya okuphezulu kwekhwalithi kuyadingeka, hhayi emithonjeni emibili yokukhanya, enye yazo ingaba ngendwangu, kanti eyesibili iyisibani sasebusuku. Uma ukuhlobisa igumbi elinamathebhu, iphephadonga, izibani zokuklama, njll. gxila eqinisweni lokuthi igumbi labantwana.
Izithakazelo nezidingo zomntwana
Uma ukhetha ifenisha ukuba ubeke endaweni yokulala, kufanele uthintane nomntwana ngokwakho noma uzicabange ukuthi ungathanda ukuthini. Uma ingane ithanda ukunakekela izitshalo, thola indawo eshalofini ngezimbali, uma uzama izingubo, awufanele ukhohlwe ngesibuko uma kuyiphupho , njengoba kuba umdlali - bese uthola udonga lwesiSweden. Kubalulekile ukuhlomisa indawo yokusebenza ikhomputha ngokufanele - ukuphakama okudingekayo kuyithebula, isihlalo esikhethekile, umbhede nge-mattress wama-orthopedic.
Ukuhambisana nezidingo zikazwelonke
Ifenisha oyifunayo yengane kufanele iphephile futhi inokwethenjelwa. Uma ingane isencane, kubalulekile ukucabangela ukungahloniphi kwakhe, ngenxa yokuthi uzama kuyo yonke indawo ukukhuphuka, ukukhuphuka, zama amandla. Zama ukuthatha ifenisha enjalo ukuze ingane ingalimazi.
Unganaki izinto ezisetshenziswa ekwenzeni ifenisha. Ungakhohlwa ukubheka imibhalo eqinisekisa ukuthi lo mkhiqizo uhlangabezana nazo zonke izindinganiso zokuphepha.
Uma ukhetha i-palette yambala, kufanele ugweme imibala ekhanyayo kakhulu, efana ne-pink ekhanyayo, ebomvu, inhlanganisela enobuthi, eluhlaza, obunobunzima, obumnyama obomvu. Kungcono ukuthatha imibala elula, e-pastel.
Ifenisha ngesitayela se-Art Art Nouveau yaseRussia
Izinyathelo ezingu-7 ezibhekiswe ekwakheni ihholo elihle
Ama-wall-papers ezindongeni - njengokungathi uyahamba ulwandle
Indlela yokwenza ikhaya elihle ngezandla zakho
Ingaphakathi ngesitayela samaNdiya
Indlu yokugezela encane: indlela yokusebenzisa kahle isikhala
Indlela yokuhlobisa ikhishi nokugeza?
Indlela yokufaka uthando lokufunda ingane
Ikhekhe nge-jamberberry jamu
Ushizi ngebunkuni: izici zokuzikhethela nokugcina, izinzuzo kanye nokulimala
IJam kusuka kuma-blackberries (i-Kiev)
Ukubona ngephupho ukuthi inja ihlasela kanjani futhi ikuluma
Amafutha omusha amantombazane
Ukugxeka inkolelo yokudla okunomsoco ngeqembu legazi
Isaladi likaKesari nenkukhu
Ukuphupha kwemilenze enomuncu
I-Horoscope yeGemini-Woman ka-May 2017
Ama-talisman namatshe esignali yeCapricorn
Fettuccine nge-asparagus, i-peas eluhlaza kanye ne-ham
Amakhekhe we-chocolate ngekakhukhunathi
Imincintiswano yamaholide omndeni
Izakhiwo eziwusizo zama-anyanisi nogalikhi